चौंरीदेउरालीमा मोतियाविन्दुको निःशुल्क अप्रेशन, बृद्धबृद्धाले दिए अध्यक्ष गौतमलाई धन्यवाद – Radio Roshi
चौंरीदेउरालीमा मोतियाविन्दुको निःशुल्क अप्रेशन, बृद्धबृद्धाले दिए अध्यक्ष गौतमलाई धन्यवाद
in रोशी खबर / समाचार / स्थानीय तह / स्वास्थ्य — by Roshikhabar —	January 21, 2021
काभ्रे जिल्लाको दुर्गम गाउँपालिका चौंरीदेउराली गाउँपालिकामा ७० वर्ष माथिका बृद्धबृद्धाहरुको आँखाको मोतियाबिन्दुको निःशुल्क अप्रेशन गर्न शुरु गरेको छ । बुधबारबाट वडा नं. ५ को जागृति माविमा अप्रेशनको लागि शिविर सञ्चालन गरेर निःशुल्क अप्रेशन गर्न शुरु गरेको हो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गाउँपालिका अध्यक्ष दिननाथ गौतमले गरेका थिए । कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष गौतमले जेष्ठ नागरिकको उचित सम्मान र स्याहारमा गाउँपालिका लागेको बताए । स्थानीय सरकार गाउँपालिका भित्रको जनताको हरेक समस्यामा एकाकर हुँदै आएको बताउँदै गौतमले आफूहरु सधैं जनताकै काखमा हुने बताए ।
अप्रेशनको लागि शिविरमा आएका जेष्ठ नागरिकहरुलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष गौतमले आफूहरुलाई आफ्नै छोराछोरी संझिन अनुरोध गरे । ‘आँखाको यस्तो समस्याको लागि काठमाडौंमा जान आमाबुबाहरुलाई धेरै गाह्रे हुने देखेकोले आफ्नै गाउँमा यो सवा गरेका हौं । यसरी आमाबुबाको सेवा गर्न पाउँदा म धेरै खुशी छु ।’ गौतमले भने, ‘आगामी दिनमा पनि यो गाउँमा यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने छ । तपाईंहरुको छोराछोरी विदेश वा कामको सिलसिलामा गाउँभन्दा धेरै टाढा होला, तपाईंको सेवामा हामी सधैं छौं, हामीलाई नै तपाईंहरुले छोराछोरी संझिनुहोस् ।’
यसै गरि कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तारा कुमारी चौंलागाईंले जेष्ठ नागरिकहरुको साथमा स्थानीय सरकार गाउँपालिका छ भन्ने अनुभूति दिलाउन यस्तो कार्यक्रम ल्याएको बताईन् ।
यसैबीच मोतिया विन्दुको निःशुल्क अप्रेशन पछि लाभग्राही जेष्ठ नागरिकहरु खुशी भएका छन् । एकातिर अप्रेशनको लागि काठमाडौं धाउनु परेन भने अर्को तिर निःशुल्क अप्रेशन गर्न पाएपछि उनीहरु खुशी भएको हुन् । आफ्नो सफल अप्रेशन पछि वडा नं. १ का ७२ वर्षिय काजी तामाङको मुहारमा खुशी देखिन्थ्यो । आफ्नो आँखाको समस्या आएपछि कसरी उपचार गर्ने भन्नेमा दिनाहुँजसो पीर मानेर बसेको तामाङ बताए । ‘आफू हिन्न पनि नसक्ने, उपचारको लागि काठमाडौं कसरी पुग्ने हो भन्ने पीर सधैं लाग्थ्यो मलाई ।’ ७२ वर्षिय बृद्ध तामाङले भने, ‘गाउँपालिका अध्यक्ष हाम्रो लागि भगवन नै बनेको रहेछ । यति सजिलै मैले उपचार पाएँ ।’
त्यसैगरि उनी जस्तै वडाका वडा नं. १ कै ७५ वर्षिय टिकामान तामाङ पनि खुशी भएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्षले यस्तो योजना ल्याएपछि आफूहरुले गाउँमै उपचार पाएको बताउँदै गाउँपालिका अध्यक्ष आफ्नै छोरोका रुपमा देखेको बताए । ‘म बुढो मान्छे, आँखाको समस्याका कारण धेरै दुःख पाएँ । आज घरको आँगनमै भन्दा पनि हुन्छ, उपचार गर्न पाएँ ।’ तामाङले भने, ‘गाउँपालिका अध्यक्षलाई मैले आफ्नै छोराको रुपमा पाएँ । हाम्रो लागि त भगवान नै हुनुभयो ।’
२ दिनमा ६५ जनाले पाए सेवा
बुधबार र विहिबार गरि ६५ जना बृद्धबृद्धाहरुको मोतियाविन्दुको सफल शल्यकृया भएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तेजबहादुर घिसिङ जानकारी दिए । उनका अनुसार बुधबार २३ विहिबार ४२ जनाको सफल शल्यकृया गरेको छ । शुक्रबारसम्म यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने घिसिङले बताए । उक्त शिविरमा अप्रेशनको लागि ग्रामिण स्वास्थ्य तथा शिक्षा केन्द्र, गोकर्ण काठमाडौंको प्राविधिक सहयोग रहेका थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महानदास लामा, वडा नं. ५ का वडा सदस्य छत्रबहादुर कोइराला, जागृति माविका प्रधानाध्यापक मन्दर लामा, धुसेनी सिवालय प्राथमिक अस्पतालका इन्चार्ज राजु चौंलागाईं लगायतका सहभागीता रहेका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख घिसिङले गरेका थिए भने स्वागत मन्तव्य वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष राजकुमार गौतमले राखेका थिए ।